MY REMEMBRANCE: ငါမုန်းတဲ့ ငါ
Posted by puluque at Friday, November 28, 2008
နံပါတ်၂ က ရည်စားမရှိကြောင်းကြွားတာလား.း)
နံပါတ် ၁ . ၈ .၉ က မမနဲ့တူတယ်.အဟားး တူဆို
မီးလေးလဲတတ်ခ်ကြွေးတွေနဲ့ပါနေပြီး ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတော့ရှိတယ် ဟိဟိ ............
အံမယ်အံမယ်...သူကကြွားထားပါလား (၂).....မလွယ်ဘူးနော်.. တို့လဲကြွားဦးမှဟီးး မမ၀ါလဲတတ်ခ်ထားသေးတယ်ကြွားတာလေးကို.... တတ်ခ်ကြွေးကသုံးခုတောင်ရှိနေပြီး ရေးပေးပါ့မယ် ခဏတော့စောင့်ပေါ့နော်း)
ဟယ်၊ လုပ်ပြီ။ ကိုပုလုကွေးကြီးနော်။ ကိုပုလုကွေးကြီး TAG တိုင်း မီးမီးပါတယ်။ ဟင့် ဟင့်။
ဒီတစ်ခါပဲနော်။ နောက်ဆို TAG နဲ့နော်။ ဒီဇင်ဘာက Thesis နဲ့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ ။
ဒီတစ်ခုတော့ ရေးပေးပါမယ်။ :P :P
ဟိ ဟိ၊ မဝေဖန်ရသေးလို့ ပြန်လာဝေဖန်တာ။
(5)ချက်ကျော်တူတယ်သိလား။ NO(2)ကတော့ တူဘူး။ :P
စကားမစပ်၊ အချစ်က ရှာလို့ရပါတယ်ကိုပုလုကွေးကြီးရဲ့။ အချစ်ကို မသိမှ ခက်မှာ။ :P :P
ဟာဟ အချစ်မရှိသေးတာတော့တူတယ်ဗျို့ ဟိဟိ